(SAWIRRO) Hay’adda MSF oo si rasmi ah howlaheeda shaqo uga bilowday isbitaalka Gaalkacyo iyo wasaaradda caafimaadka Puntland oo soo dhoweysay. | puntlandi.com
(SAWIRRO) Hay’adda MSF oo si rasmi ah howlaheeda shaqo uga bilowday isbitaalka Gaalkacyo iyo wasaaradda caafimaadka Puntland oo soo dhoweysay.
(Pi Gaalkacyo) Hay’adda MSF ayaa si rasmi ah shaqadeedii uga bilowday isbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo, waxayna si gaar ah uga howlgalidoontaa quudinta, qaybta bukaan socod eegtada caruurta iyo qaybta bukaan jiifka carurta iyo qaybta gargaarka degdega ah.
Wasiirka caafimaadka dowladda Puntland Dr, Cabdinaasir Cuuke ayaa uga mahad celiyey MSF caawinta ay ka gaysanayso isbitaalka Gaalkacyo .Wasiirku wuxuu kaloo u mahad celiyey shaqaalihii Soomaalida ahaa ee ilaa intii MSF ka baxday Soomaaliya sii waday shaqo fiican oo ay dhabar adaygeen
Wasiirku sheegay markii ugu horeysay ee uu MSF ku arkay nairobi ay u sheegeen in laga yaabo inay Soomaaliya ku noqdaan. Gaalkacyo lama hadal hayn markaas. Wuxuu sheegay in ay MSF u sheegtay in ay marka hore hal mashruuc ku bilaabayaan Soomaaliya kaas oo aan la aqoon meesha laga dhigi doono xiligaas,
Dr Cuuke wuxuu sheegay in bishii july 2015 mar uu yimid Gaalkacyo aan MSF la hadal hayn. laakiin maanta ay arrin lagu farxo tahay inay MSF go’aansato inay wassaarada caafimaadka ka caawiso isbitaalka Gaalkacyo.
Wasiirku wuxuu yiri waan ku faraxsanahay MSF inay soomaaliya kusoo noqoto gaar ahaan gaalacayo, Puntland. anagu dadaal dheer baan u galnay inaan iskaashi la samayno in MSF bukaanka Gaalkacyo u soo noqoto maadaama Gaalakacyo ay ku taal bartamaha soomaaliya Soomaali oo dhana ay joogaan kana faaiidaysanayaan adeegyada isbitaalu bixiyo.
wasiirku wuxuu sheegay in ilaa heer madaxweyne ay iskaashi la shameeyeen MSF sidii ay dib ugu soo noqon lahayd Soomaaliya gaar ahaan Puntland. waxaanan wasaarad ahaan diyaar u nahay inaan u wada shaqayno dadka ku tiirsanaan doona gargaarka isbitaalku bixinayo wasaarad ahaan iyo MSF-ba.
MSF waxaa u hadlay Kuxigeenka Madaxa MSF ee soomaaliya Cabdikarim Daahir Guure iyo Madaxa Mashruuca GaalKacyo Tidal Huda,
Abdikarim wuxuu sheegay in MSF ay Woomaaliya ka baxday AUg 2013, ilaa waagaasna ay MSF dusha kala socotay xaalada caafimaad ee soomaaliya, assessment lagu sameeyey dhowr meelood sanadkii 2016 dhamaadkiisii MSF waxay ogaatay in xaalada caafimaad gaar ahaan bukaan jiifka (secondary health) uu aad u liito. wuxuu sheegay in MSF markii ugu horeysay aysan ahayn galkacyo ka shaqayso.
Gabagabadii wuxuu sheegay in inay MSF u baahan tahay;
1- in la tixgaliyo shaqada caafimaad iyo binu-aadantinmo iyo bad qabka shaqaalaha hay’adda iyo bukaankaba
2- inay hay’addu rabto in shaqaalaha caalamiga ah iyo ku madaniga ahi ay si wada jir ah u wada shaqeyaan
3- in MSF ay awood u yeelato in ay gaarsin karto mashaariicdeeda dadka loogu talo galay ee u baahan. ayadoo ay iskaashanayaa wasaarada caafimaadka.
Madaxa mashruuca Tidal HUDA wuxuu sheegay in MSF ku dooratay Gaalkacyo sababta oo ah aqoon ay u leedahay Gaalkacyo iyo iskaashi fican oo ay ka heshaay hada iyo waagii hore dadkii lasoo shaeyeey ee wasaarada caafimaadka, iyo bulshadaba. shaqaaluhu ahaan doono mid wasaarada caafimaadku iska leedahay,
wuxuu codsaday in iskaashi lala shameeyo hay’adda sidii ay hawsheeda ku qaban lahayd.
waxaa kasoo qayb galay shirka qaybaha bulshada, gudoomiyaha gobolka, duqa magaalada, ganacsatada, haweenka iyo wargaradka bulshada. iyo wasaarada caafimaadka heer wasiir iyo heer gobol ilaa heer isbitaal.